Faallo Kooban: Maxaa Laga Filan Karaa Kulanka MW Farmajo iyo Barlamanka berito? Akhriso - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Faallo Kooban: Maxaa Laga Filan Karaa Kulanka MW Farmajo iyo Barlamanka berito?...
Go’anno waa weyn oo dowladeed saameynayana Masiir ummadeed maaha in si fudud lagu qaato ee waa in si aad ah looga fiirsadaa cawaaqibka go’aanka la qaadanayo ka dhalanaya. Madaxda ummad dhan hogaamineysa iyo xataaa shakhsiyaadka mas’uuliyadda Saaran tahay waa inay si fiican uga baaraan dagaan cawaaqibka ka dhalanaya go’aamadooda khaldama ama fudeydka lagu qaato.
Madaxweyne Farmajo waxaa lagu yaqannaa inuu mar waliba la soo boodo go’aamo uusan si fiican uga fiirsan, kuna baahiyo qaab aad u liidata sida baraha bulshada oo uu R/Wasaare ku magacaabay iwm. Sida ay qortay MOL waxaa maalinta beritto ah la isugu yeeray si kadis ah xildhibaanadda Barlamanka, gaar ahaan kuwooda ka ag dhadhow madaxtooyada iyo agagaarkeeda oo bishaan waxooda qaatay, sugayana biilasha bilaha soo socdaa. Ogow berri waxaa loo ballansanaa shirkii Dhuusamareeb 3 in la isugu tago oo halkaas looga tashado masiirkii umadda, hasa yeeshee MW Farmajo waxaa uu doortay inuu la kulmo golaha shacbiga oo isu badalay golaha sacbiska.
Haddaba maxaa iman kara kulankaas berri:
In golahaba lakala diro iyagoon fileyn oo ay ka dhacdo kabteydi ma aragtay maadaama uu Farmajo jecel yahay waxyaabaha aan la fileyn ku dhaqaaqidooda iyo ilaalinta inay distuuri yihiin iyo in kale mar haddii uu RW/Kusime ku magacaabay wareegto madaxweyne, cid uga daba hadashayna aysan jirin.
In uu MW Farmajo halkaas geeyo R/Wasaare cusub oo uu hortooda ku magacaabo oo ay 6 daqiiqo ku ansixiyaan iyagoo mar waliba galaha ku jira dadaal ah inay jebiyaan rikoordkoodii hore oo ahaa in RW -hore ay ku rideen 7 daqiiqo.
Inuu halkaas la tago in muddada loo kordhiyo oo loogu daro inta uu sheegto, iyagana sacab iyo sax weeyaan ku aqbalaan.
Ama inuu halkaas ka sheego nooca doorasho ee uu rabo oo ah inay qof iyo cod loo ansixiyo golahuna ay sacab iyo sax weeyaan ku aqbalaan.
Dhinaca kale, waxaa beryahan Madaxtooyada ka socotay ka hufidda Hawiyaha oo waxaa 7 daqiiqo lagu eryey nin kii-RW Kheyre- magacooda awood qeybsiga 4.5 ku fadhiyey, inkastoo uusan waligiis jufo hoose oo sii hooseysa mooyee ka shaqeyn danta guud ee qaranka ama tan dadka uu magacooda iyo karaamadooda ku fadhiyey kursi twitter lagula magacaabay.Waxaa kaloo halis la geliyey Yaxye Cali Hareeri oo kheyre gacanyarayaashiisa gaarka ka mid ahaa oo dharaar cad lagala wareegay gaarigii uu watay.
Sidoo kale waxaa boorsooyinkiisa bannaanka loo dhigay Dr. Nuur Diiriye oo si weyn loo hadal hayey inuu noqon doono RW xiga Kheyre ee Beesha Hawiye ka soo jeeda. DR Nuur Fuursade oo ahaa muddo 8 bilood ah xaaqxaaqayey oo saxayey dhaqanxumada madaxtooyada taallay intii uusan noqon Agasimaha guud ee madaxtooyada ayaa abaal looga dhigay in bannaanka la dhigo kdib, markii lagu arkay damac ah inuu qarankan samatabixintiisa u hanqaltaagayo oo uu rabo inuu RW dalka ka noqdo.
Arrimahaan oo dhan iyo dood beenaadda doorasho qof iyo cod waa mugdiga dalka lagu hayo iyadoo shabaabka ay muujiyeen dhuullatus cad oo 10 xaruumo degmo ay weerar ku qaadeen. Waxaasa si cad u sheegay mid ka mid ragga ugu awoodda badan hogaamiyayaasha bulshada Xamar Muxudiin Xasan Cali “ Darbaweyne’ oo yiri Xamar doorasho qof iyo cod xelli lagu qaban karo ma joogto, mana jirto cid lagu dooran karaa waqtigaan adag.
Isku soo duub Somaliya waxay mareysaa xaalad adag oo ay u bahan tahay inay ku kacaan kuwa badbaadiya, haddii kale waxay tagi doontaa meel ka adag meeshii laga keenay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo berri hortagi doona Baarlabaanka (Sababta?)
Next articleMaxaa isku soo beegay “Hadalkii Omar Filish ee Doorasho 1Q1C” & Hadal jeedinta MW Farmaajo?